Soo dejisan Android SDK Manager 23.0.2 – Vessoft
Soo dejisan Android SDK Manager
Maareeyaha SDK Android – jawi si loo horumariyo dalabaadyada ee nidaamka qalliinka Android. Software The kuu ogolaanayaa inaad si ay u abuuraan codsiyada in kamarad isticmaalo qalab ay mobile, data of GPS, Wi-Fi, helitaanka Bluetooth, Maareeyaha 3G iwm Android SDK falgala daalacashada iyo taageertaa shaqada leh qaabab kala duwan oo maqal ah ama mid muuqaal ah. Software ayaa sidoo kale waxaa ku jira dhisay-in Cutub u saamaxaya in ay qabtaan imtixaanka ka mid ah codsiyada laga hoos sameeyo qeybood oo kala duwan oo Android. Siyaada ah Manager Android SDK waxaa lagu gaadhaa iyada oo xiriirka u ah alaabta kala duwan oo lagu daro.
Abuurista iyo codsiyada test for Android
The set oo ah qalab si la codsiyada shaqeeyaan
Kartida aad u leedahay in ay ku xirmaan daro
Android SDK Manager Software la xiriira:
العربية, English, Français, Español... AutoIt 3.3.14.2
العربية, English, Українська, Français... GameMaker 1.4.1657
Horumarinta Agabka dhamaystiran ciyaarta horumarinta ee nidaamyada hawlgalka kala duwan. Software waxay leedahay mid ah saamaynta garaafyada iyo dhawaaq si loo gaaro design ugu tayada ciyaar.
العربية, English, Українська, Français... MP3Gain 1.2.5
PDF software The badasha qoraalka iyo files graphic si format PDF adigoo isticmaalaya madax bannaan abuuray printer dalwaddii.